Telefiishanka CNN oo Barnaamijka THE LEAD Ku Baahiyay Warbixin Lagaga Hadlayo Qofka Uu Yahay Kornayl Tuke | WAJAALE NEWS
Telefiishanka CNN oo Barnaamijka THE LEAD Ku Baahiyay Warbixin Lagaga Hadlayo Qofka Uu Yahay Kornayl Tuke
WASHINGTON. D.C (WJN)– Telefishinka CNN-ta ee dalka Mareykanka aya barnaamijka THE LEAD ku baahiyay warbixin lagaga hadlayay qofka uu yahay Yuusuf Cabdi Cali oo ku magac dheer Kornayl Tuke.
Kornayl Tuke waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidankii qaranka Soomaaliya ee dowladii Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa,Kornaylka wuxuu kamid ahaa sarakiil tababar fiican kusoo qaatay dalka Maraykanka sida uu sheegay qareenkiisa Joseph Peter.
Wuxuu dowladdii kacaanka ka ahaa taliyihii guutada shanaad ee milatariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu mas’uul ka ahaa tacaddiyo ka dhan ah bani’aadanimada uu ka geystay Somaliland.
Dhacdooyinka ayaa dhacay sanadihii 1970-meeyadii ilaa 1980-meeyadii, sida ku xusan warqadaha ninka dacwada gudbiyay.
Kornaylkan ayaa loo heystaa dil 30 sanno ka hor dad rayid ah oo loogu geystay Magaalada Gabiley.
Horaantii buburkii Dolwaddii Kacaanka, Tuke wuxu kamid noqday saraakiil sar sare oo qoxootinimo isaga dhiibay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Canada oo dowladda dalkaas ay muddo kadib ogaatay in loo haysto eedeymo la xadhiidha gobood fallo.
Dhacdadan ayaa horseeday in eedaymo loo jeediyo shirkada Tagaasida ee Uber oo lagu eedeeyay in baadhitaan qotodheer ayna ku sameynin dadka ay shaqaaleysiineyso.
Dacwadda la xidhiidha kiiskan oo in muddo ah soo jiitameysay ayaa si rasmi ah uga furmaya maxkamad ku taala Mareykanka, sida ay shaaciyeen wargeysyada kala ah The Guardian iyo New York Times ee kasoo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Farxaan Warfaa oo kamid ah dadka ku markhaati kacaya Kornayl Tuke ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu la kulmo ay ahayd bishii March ee sanadkii 1988-kii.
Ka hor inta aan la tooganin ayuu sheegay in jidhdil loo geystay, isagoo xilligaasna ku sugnaa Somaliland.
Sidoo kale gobolka Virginia ayaa waxa hore loogu maxkamadeeyay marxuun Maxamed Cali Samatar oo markii danbe lagu xukumay magdhow gaadhaya 21 milyan oo doolar, lacagtas oo uu sheegay in aanu bixin karin.
Waqooyiga Mareykanka waxa ka jira ugaadhsiga lagu hayo saraakiishii milateriga ee dolwaddii Siyaad Barre, kuwaa oo loo haysto in ay gaysteen gabood falo lagu la kacay shacabka Somaliland.
Halkan hoose ka daawo muuqaalka warbixinta